Akhri: Maxaad Ka Taqaan Hoggaamiye 50 Sano Dadkiisa iyo Dalkiisa Maamulaya?
Saturday October 07, 2017 - 13:54:12 in Wararka by Super Admin
Dad Badan oo aan aqoonin hab maamulka wadanka Yare ee Brunei Ma rumeysan karaan in muddo 50 sanadood ah uu xilka madaxtinimada haayo nin 71 sana Jir ah!.
Wadanka Brunei oo dhaca Bariga qaaradda waxaa shalay ka dhacay munaasabado ballaaran oo loogu dabaal degayay konton sano guuradii kasoo wareegtay markii uu xilka madaxtinimo ee wadankaas uu qabtay Xasan Al-balqiih.
Munaasabadaha oo ay kasoo qeyb galeen tobanaan kun ayay dowladdu siisay muhiimad gaar ah iyadoo lafasaxay shaqaalaha dowladdaha halka muwaadiniinta loo fidinayay adeegyo bilaash ah.
Suldaan Xasan Al-balqiih ayaa talada wadanka Brunei la wareegay sanaddii 1967 xilligaas oo uu aabihii ku wareejiyay taas oo ka dhigan in 50 sano oo xiriir ah uu haayo hogganka wadanka waana mas’uulka ugu waqtiga dheer caalamka.
Suldaan Xasan ayaa ah 71 sana jir wuxuuna dhashay sanaddii 1948 waxayna taasi lamacna tahay in 50 sano oo kamid ah cimrigiisa uu yahay Hoggaamiyaha wadanka, Brunei waxaa ku badan Qowmiyadda Mallaayga loo yaqaan waxayna ka go’day dalka Malaysia sanaddii 1984.
Sanaddii 2014 ayuu Hoggaamiyaha Brunei ku dhawaaqay in wadanka lagu maamuli doono shareecada Islaamka wuxuuna wadanka ubixiyay [dowladda islaamiga Brunei], balse Xasan Al-Balqiih sharciga islaamka kuma dhaqmo oo wuxuu majaraha u ahaa dowlad dhaaquud ah oo xubin ka ah dalladda Q.midoobe iyo dhammaan Urur goboleedyada kajira qaaradda Asia.
Dadka ku nool Brunei waa dad ghani ah dadka fuqarada aad bay ugu yaryihiin wadanka arrinta layaabka leh waxaa weeye Sultan Xasan Beer lagu raaxaysto oo uu ku leeyahay wadanka Australia ayaa ka weyn wadanka uu Suldaanka ka yahay.
Dadka ku nool wadanka Brunei 65% waa qowmiyadda Mallaayga loo yaqaan halka 10% ay yihiin shiineys 92% dadku waa muslimiin halka 8% ay yihiin Nasaaro ama Masiixiyiin, hay’adaha udooda xuquuqul insaanka ayaa ku cambaareeyay Suldaan Xasan ku dhawaaqidda tadbiiqinta shareecada Islaamka.
Suldaan Xasan wuxuu magaalada caasimadda ah ka dhisay Masjid weyn iyo Markaz diinta islaamka lagu barto wuxuuna isku tilmaamaa Nin difaaca islaamka iyo muslimiinta, wasiirka difaaca iyo maaliyadda isaga ayaa gacanta ku haaya sidoo kale waa taliyaha ciidamada qalabka sida.
Qasriga laga maamulo Brunei waa qasriga caalamka ugu weyn wuxuu ka koonanyahay 1788 qof, qasriga wuxuu ka weynyahay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Mareykakanka.
Saddex sano kadib Waa sidee wax soo saarka Malabka Saafiga ah ee Yamen?
20 Sano Kadib Dowladda Ereteria Oo Wafdi Udiraysa Magaalada Addis Ababa.